Ity no loko miloko an'ny Samsung Galaxy S6 | Androidsis
Ny 1 martsa, mpamokatra Koreana natolotra tao Barcelona mpikambana vaovao roa ao amin'ny fianakaviana Galaxy S. Fantsona roa misy famaranana kalitao, miala amin'ny polycarbonate miloka amin'ny fitaovana premium.
Ireo fahatsapana voalohany nanananay rehefa manandrana ny Samsung Galaxy S6 ary ny Samsung Galaxy S6 Edge tena tsara ny zavatra nataon'izy ireo. Ka noho izany, amin'ny fiheverana fa amin'ny 10 aprily dia ho tonga eny an-tsena ireo terminal roa ireo, mitondra andian-tsary miaraka aminao izahay Misy loko maromaro an'ny Samsung Galaxy S6 sy Samsung Galaxy S6 Edge.
1 Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge dia hamely ny tsena amin'ny 10 aprily
2 Karazan-loko azo alaina ho an'ny Samsung Galaxy S6
3 Karazan-loko azo ampiasaina amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge dia hamely ny tsena amin'ny 10 aprily
Samsung dia nanapa-kevitra ny hanavao ny loko misy azy amin'ny alàlan'ny fanolorana tonony manintona kokoa ho an'ireo mpampiasa. Ary tsy misy afaka mandà izany vaovao izany gamut miloko an'ny Samsung Galaxy S6 satria ny Samsung Galaxy S6 Edge dia tena miovaova.
Ny fara tampon'ny terminal misy endri-javatra izay manandratra azy eo an-tampon'ny sehatra. Andeha ho tadidintsika fa ny maodely roa dia mitambatra a Efijery 5.1 inch izay mahatratra ny vahaolana 2560 x 1440 teboka.
Ary farany nanapa-kevitra ny hanao tsy misy Qualcomm i Samsung ary hampiasa vola amin'ny SoC-ny. Amin'izany fomba izany, ny Samsung Galaxy S6 / S6 Edge dia mampiditra a Exynos 7420 processeur valo-core ary maritrano 64-bit, ankoatry ny fananana DDR3 RAM 4 GB.
Karazan-loko azo alaina ho an'ny Samsung Galaxy S6
Another of the ny tanjaka dia miaraka amin'ny fakantsary lehibel an'ny S6 / S6 Edge, noforonin'ilay solomaso mitovy mampiditra ny Samsung Galaxy Note 4, na dia misy ny fanatsarana ny fifantohana sy fisokafana f / 1.9 izay mampanantena ny haka sary mahafinaritra amin'ny tontolo maivana. Ny fakan-tsary voalohany dia 5 megapixels.
Aleo tadidio izany el Samsung Galaxy S6 dia hamely ny tsena amin'ny 10 aprily. Samsung Galaxy S6 32 GB dia mitentina 699 euro, ny maodely 64 GB dia 799 euro raha ny modely misy 128 GB kosa mahazaka 899 euro.
Raha ny gamut miloko azo alaina ho an'ny Samsung Galaxy S6, ny sainan'i Samsung vaovao dia White White, Safira mainty, Gold platinum ary Topaz Blue.
Ny Samsung Galaxy S6 Edge dia ho tonga amin'ny androtr'iny ihany ary ny fikirakirany samihafa dia 150 euro lafo kokoa noho ny tontonana miolikolika. Farany ny Misy gamut miloko azo alaina amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge Voahangy fotsy, safira mainty, platinum volamena, topaz manga ary emerald maintso io.
Karazan-loko azo ampiasaina amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MWC » Ity no ho loko isan-karazany an'ny Samsung Galaxy S6 sy Samsung Galaxy S6 Edge
Raha mbola miteny amiko ianao fa vita amin'ny gorila vy sy vera izy ireo dia tsy hadinoko fa tsy manana micro SD izy io.
Tsy afaka milaza na inona na inona momba an'io aho. Tena tiako ny fihetsiky ny vatan'ny alimina sy vera, saingy miaiky aho fa ny tsy fananany fanohanana karatra micro SD dia hadisoana lehibe.
Namana, manana S6 aho, adinoko ny mailaka napetrako ary tsy haiko ny fomba hanaovana izay afaka manampy ahy azafady